Unofanira kutenga riini muhomwe? | Ehupfumi Zvemari
Unofanira kutenga riini muhomwe?
Imwe yenguva dzinonetsa kwazvo mumisika yemari ndeye kurongedza kutenga uye kutengesa mumisika yemari. Ichave yakatsunga kuita sekukanganisa iyo profitability yekushanda. Haisi chete yakakosha danho rekuwedzera kudzoka pane kuchengetedza, asiwo sedziviriro huru mumabasa anoitwa. Nezvikonzero izvi, unofanirwa kuona kuti kufamba uku kunoitwa pasi peakanakisa emazano. Hazvishamise kuti iri mari zhinji yauri kusiya.
Kuti uone kukosha kwekutenga nekutengesa kwakanaka muequities, hapana chinhu chiri nani pane chaungarasikirwe nacho kana kuwana nekutsauka kushoma pane aya mafambiro. Inogona kukubhadharira maeuro mazhinji mune yega yega maodha akatangwa pamusika. Iwe haugone kuregeredza chakakosha ichi chikamu kana iwe uchida kuve wakasarudzika investor. Nekudaro, kazhinji yenguva idzi nongedzo dzechiito iwe uchapihwa kwauri naiye kudzidza mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, kubva ikozvino zvichienda mberi uchave uine inopfuura pfungwa imwe yekuvatora kuenda kuquity pasi. Zvese mumisika yenyika uye kunze kwemiganhu yedu.
Imwe yekiyi kuti iwe ubudirire mune yako equity mashandiro ndeyekugadzirisa akanyorwa mitengo. Asi kwete izvo chete zvekutenga, asiwo mukutengesa. Ichave zvakare iri zano rinoshanda rekuwedzera purofiti yekushanda. Pamusoro pemamwe marongero akawedzera kana mashoma. Iwe haugone kukanganwa kuti kukanganisa mune aya mitengo emitengo kunogona kuburitsa imwe dambudziko nemaakaundi ako ega. Nechikonzero ichi zvakakosha kuti iwe usasiya chero chinhu kune improvisation.
1 Kutenga: dzakasiyana nzira
2 Kuremekedza kuramba
3 Hapana miganho munzira
4 Sei uchifanira kuvhura zvinzvimbo?
Kutenga: dzakasiyana nzira
Kukanganisa kunoitwa nevashambadzi vadiki nepakati pamwe neakawanda frequency kuita zvinopesana nemaoko akasimba emisika yemari. Ndokunge, tenga pavanotengesa uye zvinopesana. Nekuti imwe yekiyi dzebudiriro mukutengesa kwemasheya iri mune yechinyakare asi inoshanda axiom inoshanda kune equities. Iyo inongobikira kune chimwe chinhu chiri nyore se tenga kana mitengo yakaderera uye kutengesa pavanenge vari kumusoro. Nguva dzose mukati mechimiro chimwe chete kuti ufambise iri basa raunaro pamberi pako. Kana iwe ukabudirira, usakahadzika kuti iwe unozotora yakawanda ivhu rakawanikwa kuti usvike chako chekupedzisira chinangwa. Izvo hapana chimwe kunze kwekuwana yakanyanya mari mibairo.
Zvakanaka, chiitiko ichi hachisi chechokwadi nguva dzose. Nekuti zvinoitika kuti iwe unogona kunge uri mumamiriro ekuti iwe unoshaya mukana wekupinda mumusika wekutengesa apo izvi zvatoenda kumusoro zvakanyanya. Icho chidanho chinogona kushandiswa nevashambadziri vakuru kutora zvinzvimbo mumakero. Zvakanaka, ndizvo zvaunofanira kuzviitira kana iwe usiri kuda kuzviona iwe mune inopfuura rimwe dambudziko kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti kana iwe ukawira mumuedzo uyu, kune zvakawanda zvakawanda zvaunogona kurasikirwa kupfuura kuwana. Idzidziso iyo inokupa iwe neruzivo rwakaunganidzwa pamusoro pemakore nemakore kuisa mari yako mune ino yefaimari.
Resistances idanho remutengo rakakosha seyakakosha mune chero mashandiro pamusika wemasheya. Nekuti mukuita, iri danho apo kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, masimba ekudzika kana ekumusoro mafambiro anogona kugadzirwa. Kwete pasina pasina zvinopesana zvinopfuura chichava icho chinokonzeresa kuunza kukoshesa kwakazara mumitengo panguva inotevera yezvikamu zvekutengesa. Kunyangwe kusarudza kwehasha kutenga kuti mari ichengetedze nenzira kwayo chaiyo. Icho chimwe chedzidziso dzekutanga idzo mutyairi asina ruzivo rwakanyanya mumisika yemari anofanira kudzidza.
Nekuti kana, kune rimwe divi, mutengo wacho usingakwanise kukunda kusagadzikana uku, zvinowanzoita mutsetse wekudzika unogona kudzikisira kukosha kwesitoko. Mune ino kesi chinhu chakangwara kwazvo kuita ndeche shandura zvigaro nekukurumidza sezvazvinogona. Pachave nenguva yekutenga masheya zvekare, asi ino nguva pamutengo wekukwikwidza zvakanyanya kupfuura nakare. Kusvika pakuti inogona kuenda kunotsvaga rutsigiro runotevera panogadzirwa nzvimbo panomira mapopoma. Iri zano riri nyore kushandisa uye kwaunogona kuwana mabhenefiti mazhinji kubva zvino zvichienda mberi.
Iwo marambidziro akagadzirwa munzvimbo yemutengo iri nyore kwazvo kuziva. Kazhinji zvinoshanda kumisa kukwira kwakapfuura mumutengo uye kuti kukunda kwayo kunoshanda chaizvo zvakakosha kuti perekedzwe nekuwedzera kwakakosha muhuwandu hwekushanda. Icho chichava iko kusimbiswa kwechokwadi kwekuti stock ichaita nyowani kumusoro kumusoro. Nesimba rakanyanya kana kushoma rakatsanangurwa, zvinoenderana nezvimwe zvinokosheswa izvo zvinokosheswa nemubvunzo. Kuva, chero zvakadaro, zano iro rinoshandiswa nechakanaka chikamu chevadiki nepakati varimi.
Hapana miganho munzira
Kana pasisina zvimhingamupinyi kumberi, ndiwo mamiriro anoenderana nekukwira kwemahara. Ehezve, ndiyo yakanyanya kunakira zvido zvevaponesi nekuda kwezvainoreva zvine mutsindo. Inofanirwa kutorwa mukana ne kutenga kukuru nevatengesi. Hazvishamisi kuti zvinorehwa nemufananidzo uyu wakasarudzika zviri pachena. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti haisisina imwe mirawo mberi. Saka, saka, mukana unopihwa nemisika yemari nguva nenguva. Uye zvirokwazvo haugone kuramba ichi chikumbiro chaunopihwa kwauri.
Iwe unowanzo kuve neuptrend kwenguva yakareba. Chero zvazvingaitika, haina kuregererwa kubva pane chaidzo kugadziriswa mumitengo yayo. Kufambisa kunogona kushandiswa kuunganidza zvinzvimbo mumatokisi akasarudzwa. Kunyangwe kuburikidza nehurongwa hwekuchenjerera hunogona kuve hwakanangana nepakati pepakati. Kubva pane ino isiri yakajairika mamiriro mune equities, iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunyatsoteerera kuti uone hutsika hunogadzira hunhu huno hunhu.
Nekuti zviripo, hapana nguva zhinji umo chimiro che sununguka kusimuka, asi pavanopedzisira vaonekwa, unenge usisina sarudzo kunze kwekungopinda mumisika nenzira ine hukasha chaihwo. Iyo inzvimbo yemutengo uko nzvimbo dzekutenga zvakajeka dzinonyanyisa pamusoro pevatengesi. Nekutwasuka kwakatsetseka pamitengo iyo musimboti haina chero mhando yemiganhu. Zvirinani pane ipfupi pamatemu kuti ugone kuchengetedza nzvimbo dzako pasina matambudziko akawandisa.
Sei uchifanira kuvhura zvinzvimbo?
Kune zvikonzero zvakawanda zvauchazove nazvo kubva zvino kusarega nzvimbo idzi mumisika yemari. Uye zvechokwadi, yehunhu hwakasiyana, sezvo iwe uchizokwanisa kuona kubva kwechinguva chiziviso. Hazvishamisi kuti mikana mitsva inovhurirwa iwe kuti ugone kuwedzera mari muakaundi yako yekutarisa. Nezvikonzero zvakasiyana zvatinoisa pachena pazasi.
Icho chiri pasina kupokana chinonyanya kushambadzira chaungawana mumisika yemari. Nekuti ndiyo yega haizomise miganho pauri maererano nekwaniso yekuongorora iwe yaunogona kukudziridza munzvimbo dzako. Iyo ingangoita isingagumi sezvazviri panguva yayo-yenguva-yepamusoro.
Inokutendera iwe kuti udzore-chinzvimbo chavo chero nguva uye mamiriro. Nekuti iwe unogona kutora mukana wekucheka uko pasina mubvunzo kuchazogadzirwa, kupinda semugovani. Nguva zhinji sezvaunoda, sezvo zviri zviverengero izvi zvinogara kwenguva refu maererano nemisi yakatarwa.
Mamiriro ezvinhu akakodzera kwazvo kuti iwe utenge zvine hukasha panzvimbo pezvakarongeka. Nekuti mukuita, isangano iro inopa kuvimbika kukuru mukuzadzisa zvinangwa. Kusvika pakuti iwe unogona kuisa njodzi kupfuura dzimwe nguva. Ehe, hauzove nematambudziko akawandisa kuzadzisa zvinangwa zvako zvakanyanya muhukama nenyika inogara yakaoma yemari.
Mumakore ese panogara paine masheya mashoma anoenda nemamiriro aya yakakosha. Iwe unongofanirwa kunyatsoteerera kuti uone kuti vaite nekukurumidza. Nemaitiro akati wandei pagore rega rega iwe unozokwanisa kugutsa ichi chikumbiro muchikamu chekudyara.
Iko hakuna nzira dzakanyanyisa dzekuita nekirasi iyi yemitengo. Asi iwe unotofanira kudaro rega mitengo yemasheya imhanye. Kusvikira nzvimbo yemutengo iwe yaunofunga seyakakodzera kuti itengese kutengesa. Zvichida zvishoma kana munzvimbo dzayo dzose. Iyi inzira isingakundike yekuti account yako yekutarisa ikure zvakanyanya.
Izvo hazvizove zvakafanira kuti iwe umanikidze hapana yekumira kurasikirwa kuraira sezvo kuvhiya uku kusingazobatsire mumisika yemari. Kuchengeta ziso kuvandudzwa kwemitengo kunove kwakaringana kuchengetedza zviwanikwa zvako. Kusvika padanho rekuti ichagadzira kumwe kuchengeteka munzvimbo dzawakavhura panguva iyoyo.
Imwe yekupedzisira yezano yezano inogona kukupa iwe isingatendeke mhedzisiro inotangira kubva pachokwadi chekuti une nguva yakareba kwazvo kuvhura nzvimbo. Iwe haufanire kudzikamisa iwe kune anokurumidza mazwi, saka iwe unofanirwa kuve uchinyatso kuziva nezve mafambiro aya mumari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Unofanira kutenga riini muhomwe?
Chii chinonzi etf
Chengetedza mari muzviitiko zvisina kunaka